जेट ब्लू एयरबस ए-एक्सएनएक्सएक्स प्याकेज। एक्कासि.....
प्रश्न जेट ब्लू एयरबस ए-एक्सएनएक्सएक्स प्याकेज। एक्कासि.....
1 वर्ष6महिना पहिले #774 by spilok
मैले केहि महिनाको लागि V320 मा जेट ब्लू ए-एक्सएनक्स मेगा पाक विमानहरूको मजा आयो। एक सुडडे को सबै, म एक4को एक सभ्य दूर गति मा तेजी देखि नहीं गरेर सकते। तिनीहरू सचेत छन्, कछुए जस्तै चल्छन्, र मैले प्रयास गरेको केहि पनि तिनीहरूलाई प्रयोग गरे जस्तो लाग्न लागेका जस्तो देखिन्छ। कुन कुरा परिवर्तन भयो? मैले तिनीहरूलाई अस्थापित गरें र तिनीहरूलाई पुनःस्थापित गरें, तर तिनीहरू त्यहि काम गर्छन्।
के यो हेर्न को लागी यो प्याकेज यस प्याकेजमा सबै विमानहरूमा लाग्न सक्छ भनेर के देख्न सक्छु? मैले तिनीहरूलाई रिकको बाट डाउनलोड गरेँ जुन उनी P3dv4 लाई स्वीकृत छन्।
1 वर्ष6महिना पहिले #779 by spilok
मैले पत्ता लगाए। मेरो पुन: स्थापना पछि मेरो जोस्टिक सही तरिकाले क्यालिब्रेटेड नभएको जस्तो देखिन्छ। मैले अनलिङ्क गरें, त्यसपछि अंशांकनमा पूर्वनिर्धारितमा सेट गर्नुहोस्। पुन: क्यालिब्रेटेड र मेरो सबै शक्ति अब फिर्ता छ। देखिन्छ कि थ्रटल कम्प्लिबेशन खराब थियो।
पढ्नको लागि धन्यबाद।